भर्खरै गएकाे भूकम्पपछि जापानमा यस्तो अवस्था! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > भर्खरै गएकाे भूकम्पपछि जापानमा यस्तो अवस्था!
admin September 12, 2020 अन्तराष्ट्रिय	0
खुसीको खबर ! डिभी नपरेर के भो त? अब कामदार भिषा मै अमेरिका जान पाइने यस्तो माैका!
कोरोनाले कार, एम्बुलेन्स, घर र सडकमा ला’स छ’रप’स्टः हेर्नुस् मन छुने केहि तस्विरहरू…